Abdisalam Cadaay oo gool ka dhaliyey kooxdiisii hore ee Strømgodset, iyo viking oo aan wali isdhiibin - NorSom News
Abdisalaam Ibrahim Cadaay ayaa shaley gool ka dhaliyey kooxdiisii hore ee Strømgodset , ciyaar kusoo dhamaatey barbaro 1-1. Viking ayaa marti u aheyd kooxda Strømgodet oo ka dhisan magaalada Drammen. Goalka cadaay ayaa Viking u sahley iney wali qeyb kasii ahaato tartanka loogu jiro kaalinta 3-aad ee horyaalka heerka koowaad ee wadankan Norwey.
Cadaay ayaa labo xili ciyaarood oo hore(2012 iyo 2013) amaah kula joogey kooxda Strømgodset. Waxa ayna aheyd xiligii uu Abdisalaam u ciyaari jirey kooxda Manchester city.
Horyaalka Tippeligaha ayaa hada marayo heer gabo-gabo ah, waxaana kooxuhu ay dagaal iyo hardan ugu jiraan iney boos ka helaan kaalimaha sare ee horyaalka. Naadiga Rosenberg ayaa mar hore meel ku tiirsadey oo qaadey horyaalka, waxa eyna si toos ah u aadey is reeb-reebka tartanka Champions League ee sanadka 2016/2017. ilaa 7 kooxood ayaa dagaal ugu jiro kaalimaha 2-aad iyo 3-aad ee horyaalka, waxaana kooxahaas kamid ah Viking oo uu u ciyaaro Abdisalam Cadaay iyo Haugesund oo u safto Liibaan Cabdi oo ah ciyaaryahan soomaali ah.
Kooxdii gasha kaalinta 2-aad ama 3-aad ayaa iska xaadirin doonta is reeb-reebka koobka Europa League, waxaana suurtogal ah in ciyaaryahan soomaali ah oo reer Norwey ah, uu kasoo dhex muuqdo mid kamid ah tartamada kubada cagta ee ugu qaalisan aduunka.
-(Halkan ka daawo ciyaar Viking iyo Strømgodset iyo goolka Cadaay)
Previous articleGabar Norwiiji ah oo boos laga siiyey filmka K´naan Warsame iyo warbaahinta Norwey oo amaan kala dul dhacdey
Next article800 qof oo sharciga lagala noqdey iyada oo 400 kamid ahna la siiyey sharci nooc kale ah